Indlu encinci e-Hillhead, e-Inverfarigaig, e-Inverness
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguCarolyn
Ifakwe ngokupheleleyo kwikhabhathi yokungena yestudio kwindawo yasemaphandleni ecaleni kweLoch Ness. Iihambo ezintle zehlathi kunye nobomi obuninzi basendle. Kumzantsi weLoch Ness Trail yindawo egqibeleleyo yokuhlala ukuze ujonge icala elizolileyo leLoch Ness.
Indawo efanelekileyo yokuma yokuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela iphenyane, ukukhwela isikhephe, isithuthuthu okanye ukhenkethi lwemoto ngeeholide.
Iihotele zasekhaya kunye neekhefi (iikhilomitha ezi-2.5) okanye upheke ekhitshini elinezixhobo, iiodolo zegrosari ziya kwamkelwa, zingapakishwa kwaye zigcinwe kwangaphambi kokuhlala ukuze yonke into ilungile xa ufika.
Indawo yokuphumla ngokugqibeleleyo ukubaleka ilizwe lasezidolophini. Icala laseMzantsi Loch Ness libizwa ngokuba licala elizolileyo ngesizathu esihle. Indawo esemaphandleni kakhulu apho kukho ulonwabo oluncinci. Ukuhamba ngemizuzu emihlanu ukusuka endlwini kuya kukusa kwiindawo ezintle ecaleni kweLoch Ness okanye kwiindledlana kwiindawo ezixubeneyo zemithi.
Ikhabhathi sisitayile sestudiyo esinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (ene-cooker, ifriji, imicrowave, itoaster, iketile, ukupheka kunye netafile yetafile njl.njl
Indawo yokuphumla ene-tv, iincwadi ezininzi kunye neeDVD, iWiFi (ukusetyenziswa ngokufanelekileyo), itafile yokutya kunye nezitulo.
Igumbi lokuhlambela elahlukileyo le-en-suite (iitawuli, isepha, umqulu wendlu yangasese unikezelwe) kunye nendlu yangasese kunye nesitya sokuhlambela izandla
Ibhedi e-1 ephindwe kabini kunye nebhedi enye encinci yesofa enebhedi. Ibhedi yesofa yayiza kuhlala isongiwe ekufikeni kwayo ukuze igcine indawo ide ifuneke.
Ukugcinwa okuninzi kunye nokuxhoma kwi-wardrobe kunye nendawo yokomisa izixhobo ezimanzi. Isixhobo sokomisa iinwele kunye neetongs zeenwele nazo zinikezelwe.
Ezinye izinto, ukuba kubanda ngokwaneleyo ukufudumeza ngoko ke nakweyona mozulu imbi kakhulu uya kuba shushu, wome kwaye ukhululeke.
Indawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo yeemoto, iibhayisekile kunye nezithuthuthu kwindawo yokupaka ngaphandle kwesitalato.
Indlu encinci ikwindawo encinci yezindlu ecaleni kwendlela ephambili esuka e-Inverness ukuya eFort Augustus kwicala elingasezantsi leLoch Ness-indlela eya ithandwa ngabakhenkethi kodwa ayixakekanga njengelinye icala.
Ukuba kukho nantoni na efunekayo engekho esandleni ndicela ubuze, ndingavuya ukunceda.
Okona kulungileyo, ukuba imozulu ilungile, ucango lwangemva lwasekhitshini luvula kumgangatho welanga, ifenitshala yegadi kwiveranda kunye ne-bbq ekhoyo.
Indawo yasemaphandleni ekufutshane nohambo oluthandekayo eLoch Ness okanye kwiinkuni zase-Inverfarigaig kunye nembonakalo entle yabelusi ukusuka endlwini.
Eyona venkile ikufutshane, iofisi yeposi kunye neekhefi kunye neehotele zikumgama oziikhilomitha ezi-2.2 eFoyers. Idolophana encinci kunye nokuhamba kakuhle (1/2 hr - 1hr) okanye ukuhamba okufutshane. Ezinye iindawo ezilungileyo zimalunga neekhilomitha ezisi-8 kwiidrive ezithandekayo. Malunga nemizuzu engamashumi amabini ukuqhubela phambili kuya kukusa kwilali enkulu yaseFort August kunye nomjelo odumileyo waseCaledonian okanye kwelinye icala i-Inverness, ikomkhulu leentaba.
Isithuthi sakho siluncedo ukufumana okona kulungileyo kwindawo kodwa kukho inkonzo yebhasi encinci emi phantse emnyango wethu.
Ndihlala ndikhona kodwa ukuba andikho ndiza kufumaneka ngefowuni okanye ndikushiye nenani lomntu onokunceda xa kufuneka. Ndiya kukushiya ngokubanzi ukuba ujabulele iholide yakho kwaye ungangeneleli ngaphandle kokuba ufuna uncedo okanye naluphi na ulwazi lwendawo.
Ndihlala ndikhona kodwa ukuba andikho ndiza kufumaneka ngefowuni okanye ndikushiye nenani lomntu onokunceda xa kufuneka. Ndiya kukushiya ngokubanzi ukuba ujabulele iholide yakho kw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Inverfarigaig